Chineke Ọ̀ Na-eche Banyere Gị? (Abụ Ọma 40:17)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Anọ m n’ahụhụ, adakwara m ogbenye. Jehova na-echeta m.” *—Ọ BỤ EZE DEVID, ONYE CHỊRỊ IZREL N’OGE OCHIE, KWURU IHE A.
“Mba niile dị ka mmiri si na bọket tapụ.”—AỊZAYA 40:15
Devid ò kwesịrị ichewe na Jehova na-echeta ya? Chineke ọ̀ na-eche banyere gịnwa? Ọ na-esiri ọtụtụ ndị ike ikweta na Chineke onye pụrụ ime ihe niile ji ha kpọrọ ihe. Gịnị mere o ji esiri ha ike ikweta?
Otu ihe kpatara ya bụ na Chineke abụghị mmadụ, ọ kakwa ụmụ mmadụ. Ọ bụrụ na Chineke anọrọ n’eluigwe lee mba niile anya, ha dị ka “mmiri si na bọket tapụ; ọ na-ewerekwa ha dị ka uzuzu nke dị n’elu ihe ọ̀tụ̀tụ̀.” (Aịzaya 40:15) E nwere otu nwoke na-ede akwụkwọ n’oge a. O kweghị na Chineke. Ọ sịrị na “ọ bụrụ na mmadụ chere na Chineke dị nakwa na Chineke ji ya kpọrọ ihe, nweekwa mmasị n’ihe ndị ọ na-eme, onye ahụ mụ anya na-arọ nrọ.”
Ma, e nwere ndị chere na Chineke anaghị eche banyere ha n’ihi ihe ọjọọ ha na-eme. Dị ka ihe atụ, otu nwoke aha ya bụ Jim kwuru, sị: “M na-ekpe ekpere mgbe niile ka obi ruo m ala nakwa ka m na-ejide onwe m. Ma obere oge, mụ ebidokwa wewa iwe ọkụ. M bịaziri chee na ihe ọjọọ eriela m ahụ́ nke na Chineke enwelighị ike inyere m aka.”
Ebe Chineke nọ ọ̀ dị ezigbo anya nke na ọ naghị ahụ anyị? Olee otú o si were anyị bụ́ ndị na-ezughị okè? A sị na Chineke emeghị ka anyị mata ụdị onye ọ bụ, o nweghị onye gaara aza ajụjụ ndị a. Ma, Okwu Chineke e dere n’ike mmụọ nsọ, ya bụ, Baịbụl, mere ka o doo anyị anya na Chineke anọghị ebe dị anya, ọ bụghịkwa onye ihe gbasara anyị na-anaghị emetụ n’obi. Baịbụl sịrị na “ọ nọghị n’ebe dị anya n’ebe onye ọ bụla n’ime anyị nọ.” (Ọrụ Ndịozi 17:27) N’isiokwu anọ na-eso nke a, anyị ga-eleba anya n’ihe Chineke gwara anyị gbasara otú o si nwee mmasị n’ebe onye ọ bụla n’ime anyị nọ nakwa otú o sirila gosi na ya nwere mmasị n’ebe ndị mmadụ ibe anyị nọ, bụ́ ndị dịrị ndụ otú a anyị dị ndụ ugbu a.
^ para. 3 Abụ Ọma 40:17; Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.